नेकपामा यसरी फाट्यो बादल, यसरी बर्सियो पानी « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७७, शुक्रबार १४:००
यसरी बल्लतल्ल बादल फाट्यो । प्रतीक्षा रह्यो, अब यो फाटेको बादलले कस्तो वर्षा ल्याउँछ ? सिमसिमे कि मुसलधारे ? अन्तरविरोध बाक्लिँदै गएपछि ललितपुरको धोवीघाटस्थित अगेनो लाउञ्जमा गत बुधबार माधव–प्रचण्ड पक्षधर नेता र मन्त्रीहरु जुटे । अनि, बादलको वर्षा त्यहाँ देखियो । उनले भने, ‘केपी ओलीमा पार्टी र सरकार चलाउने ल्याकतमै समस्या रहेछ । सोच्ने दृष्टिकोणमै समस्या देखेँ । गृहमन्त्री भएको हुनाले मैले विश्वासको वातावरणमा काम गरेको हुँ । दिनदिनै प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएर काम गर्न पनि सकिँदैन थियो । त्यसैले म यताको कि उताको भन्ने प¥यो होला । साथीहरुसँग सल्लाह भयो । कुराकानी हुँदा अबचाहिँ निर्णायक पोजिसनमा जानुपर्छ भन्ने भयो । त्यसैले म मेरै मौलिकताअनुसारको लाइनमा आएँ ।’ उनले यसो भनेपछि हलमा गुञ्जिएको ताली पार्किङसम्म प्रष्ट सुनियो ।